Adreesị: 47890 Città di San Marino, San Marino
Nlegharị anya: Ụlọ ndị mmadụ (Gọọmenti Gọọmenti), Ụkpụrụ nke nnwere onwe, Parva Domus
Mgbe ị na-abanye San Marino , Freedom Square ga-abụ isi okporo ámá ya. Nke a bụ isi n'okporo ámá nke isi obodo San Marino na ọ dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke Basilica nke Saint Marina . Ebe nkiri na ebe ndị mara mma dị na San Marino dị nso nke ọma site na ibe ha, ya mere na Freedom Square ị pụrụ ịhụ ụlọ nke ndị mmadụ na-ewu ụlọ, nke bụ Statue of Liberty, nke na-ewu Parva Domus.
Ụlọ ndị mmadụ na San Marino
Ụlọ ndị mmadụ na-eje ozi dịka ebe obibi nke gọọmentị na ọfịs onyeisi oche nke isi obodo ahụ, e nwere General Council Council, ndị isi ụgbọ mmiri, ndị isi obodo na Council nke iri na abụọ. A na -enye ndị na-ewu ụlọ nke Italy Francesco Addzurri iwu a ma ama Palazzo Publico , ọ na-aga n'ihu ruo afọ iri, site na 1884 ruo n'afọ 1894.
Obere oge gara aga n'otu ebe ahụ bụ Ụlọ nke Obodo Ukwu ahụ, bụ nke n'oge ahụ jere ozi dị ka ebe obibi nke gọọmenti. Mana n'afọ 1996, e weghaara ụlọ ochie ahụ ma ugbu a ọ dị ezigbo mkpa. A na-eji nkume na-egbuke egbuke na-emepụta mgbidi ndị ahụ mpụ, ha nwere ihe oyiyi nke ndị nsọ asọpụrụ na ọtụtụ ogwe aka. Akụkụ dị mkpa nke ụlọ ahụ bụ ihe oyiyi ọla nke St. Martin, bụ onye guzobere San Marino. Na ụlọ ahụ, e nwere ụlọ elu elekere, nke nwere mgbịrịgba nke na-akpọ, ma ọ bụrụ na e nwere ihe ize ndụ, dọọ aka ná ntị banyere ndị obodo ahụ.
Ụlọ Nzukọ Ukwu nke General Council kwesịrị ịpụ iche site na ụlọ eze. Enwere ike iru ya na steepụ mara mma. Ụlọ ndị na-adọrọ mmasị bụ Ụlọ Nzukọ nke Ụlọ Ahịa nke iri na abụọ na ọfịs nke ndị isi na-achịkwa ebe ha na-eme oriri.
Na-agafe n'ime ụlọ mbata ahụ, ị ​​ga-ahụ onye nwere obi ụtọ, nke na-egosi ndị nsọ atọ bụ ndị na-asọpụrụ nke mba ahụ. Aha ha bụ: Marin, Quirin, Agatha.
Ọ bụrụ na ị gaa San Marino na Freedom Square na mbụ nke April maọbụ nke mbụ nke October, ị nwere ike ịhụ ememe na-atọ ụtọ mgbe a na-akpọ aha ndị isi na-achị achị si na mbara ihu dị n'etiti ụlọ ahụ.
N'oge njem nleta na nso ụlọ ezumezu, a na-emepụta ihe ngosi ọzọ na-enweghị atụ, nke na-adọta ọtụtụ ndị nlegharị anya - mgbanwe nke ndị nche.
Ihe oyiyi nke nnwere onwe na Parva Domus
Na square e nwere ihe ọzọ dị mkpa ama - Statue of Freedom. Ọ na-akpata ọbụna mmasị karịa ụlọ ahụ. E gosipụtara ihe oyiyi ahụ n'obodo ahụ site na Berlin Countess Otilia Heyrot Wagener. Ọ bụ onye na-akpụ ihe oyiyi Stefano Galletti kere ya na marble ọcha ma gosipụta dike nke na-aga n'ihu na-ebu ọkụ ọkụ n'aka ya. Isi nke ihe oyiyi a ka okpueze mara mma, nke ezé ya na-echetara ụlọ elu atọ nke San Marino. Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ịmara na a na-egosipụta onyinyo nke ihe oyiyi a na mkpụrụ ego nke San Marino na cents abụọ. Ndị nduzi nyere ndị njem nleta ndụmọdụ iji chekwaa mkpụrụ ego ndị ahụ maka ọdịda.
Ozugbo n'azụ onyinyo nke nnwere onwe na pavrị bụ chalbs slab na oyiyi nke rose nke ifufe. Na site na square ị nwere ike ịhụ ihe na-esonụ na-adọrọ mmasị San Marino - ebe ili ozu oge ochie.
Ọzọkwa na square, na-abụghị Palazzo Publico, bụ ụlọ nke Parva Domus (Parva Domus). N'oge a, steeti State na-ekwu banyere ihe ndị dị n'ime San Marino dị n'ebe a, ma ịkọwa ụlọ a pụtara maka oge mbụ na 1353, mgbe a na-enwe nzukọ ọha mmadụ n'ebe ahụ.
Isi nke gburugburu
Ije ije na Piazza della Liberta, ị ga-ahụ na ọ na-ahapụ ọtụtụ obere n'okporo ámá ndị ga-adọrọ mmasị maka ndị njem nleta. Na nso square ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ụlọ ahịa, nke na-ere ọtụtụ ihe ncheta. Ịnwekwara ike ịzụta ngwongwo akpụkpọ anụ na ọrụ nke eji arụ ọrụ. Dị ka square, na n'okporo ámá ndị ọzọ, ọtụtụ ndị obodo na ndị njem na-agagharị.
Ụlọ ihe ochie nke ihe ochie
The Museum State
Ihe ngosi nke eroticism
Ụgbọ mmiri Madrid
Nkume "Mkpịsị Aka nke Troll"
Nourishing ihu ude
Agbamakwụkwọ na Style style
Nkume artificia iji mechie isi ụlọ ahụ
Njikere maka ezumike oge okpomọkụ na kpo oku
Nnukwu kaniyon nke UAE
Igwe ihu ọma
Grated ájá achicha na jam
Nri nke ịkọ nne na colic
Ego ole ka okpomọkụ dị maka ARVI?
Rake maka motoblock
Esi esi esi ofe?
Umu Azu ndi nwanyi
Tomato "n'okpuru aji uwe"
Ntugharị na iko